Sambava: bodoin’ireo olom-boafidy ny tanin’ny mponina | NewsMada
Sambava: bodoin’ireo olom-boafidy ny tanin’ny mponina
Mahatsiaro tena iharan’ny tsy rariny ireo mponina amin’ny velaran-tany ana hekitara maro ao Sambava. Tratry ny an-kafetsena sy fibodoana tany ataon’ireo olom-boafidin’ny fitondrana teo aloha izy ireo. Efa nandresy teny anivon’ny fitsarana ireo mponina tompon’ny tany, saingy tsy nisy ny fampiharana ny didy. Voasoratra ara-dalàna amin’ny tompony anefa ny tany. Afaka nanorina tamin’io tanim-panjakana io izy ireo, saingy nampiasa paika maloto ireto olom-boafidy ireto. Nambaran’izy ireo tany am-boalohany fa azon’ny rehetra anorenana izany ary nampirisika olona hanorina sady hakana vola. Miantso ny tompon’ny tany avy eo ireto olom-boafidy ireto rehefa tafatsangana ny trano ary mitaky vola ho saran’ny fanesorana ireo olona ireo amin’ny toerana indray. “Efa nandefa fitarainana izahay nefa tsy nisy tohiny na efa nana maintimolaly ny tany aza izahay… Tany efa vita “titre” sady vita baorina ity nefa ambaran’ireo depiote ireo fa tsy mbola vita izany… Ara-dalàna anefa ny taratasinay ka mampalahelo anay izany… “, hoy ny solontenan’ny mponina.
Tafiditry ny resaka politika
Nanterin’izy ireo fa tonga hatrany amin’ny fakana volabe izany. Niaiky ny mpisolovava fa misy resaka politika ilay raharaha. “Tsy maka tany ho azy izy ireo fa hamidiny ary ao ambadik’io hatrany ny depiote… Efa misy didy manala ireo olona ary efa tonga teo ny mpitandro filaminana, saingy matahotra hoe sao hikorontana… Milaza ho mahavita mamaha ny olana sady maka vola ireo tambajotra ireo na amin’ny andaniny efa nipetraka teo, tompon’ny tany, na koa ny ankilany, vao niditra”, hoy ny mpisolovava, i Jonarison Abdon Julien.
Mitaky ny fandravana ny didy efa navoakan’ny fitsarana mamerina ny tany amin’ny tompony ireo mpibodo ny tany amin’izao fotoana izao. Efa nandresy hatrany teny amin’ny fitsarana anefa ireo tompon’ny tany, saingy tsy nahitana tohiny izany.
Tahotra amin’ny fampiharana ny didy
Misy tahotra amin’ny fampiharana ny didy? Fotoana anefa izao hampiharana ny tany tan-dalàna mba hitokisana ny fitsarana. Mila ny fanjakana hiaro ny taniny koa ny vahoaka nefa tsy hita taratra ny fandraisana andraikitra. Tsy mihatra rahateo ny lalàna ka miditra an-tsehatra ny mpanararaotra… Ampahany ihany amin’ny olan’ny fananan-tany izao. Ho tonga hatraiza izany izao ity raharaha iray any Sambava ity ?